GTranslate: Otu Mfe Ntughari Ntughari Ntughari Iji Google Translate | Martech Zone
Monday, November 2, 2020 Tọzdee, Machị 18, 2021 Douglas Karr
N'oge gara aga, m na-ala azụ n'iji a ntụgharị asụsụ igwe nke saịtị m. Ọ ga-amasị m ịnweta ndị nsụgharị na ụwa niile ka ha nyere aka n'ịsụgharị saịtị m maka ndị mmadụ dị iche iche, mana ọ nweghị ụzọ ọ bụla m ga-esi kwụọ ụgwọ ndị ahụ.
Nke ahụ kwuru, achọpụtara m na enwere m ọdịnaya nke saịtị m n'ọtụtụ mba - ọtụtụ mmadụ na-ejikwa ya ntụgharị google iji guo ọdịnaya m n’asụsụ ha. Nke ahụ na-eme m nchekwube na ntụgharị asụsụ ahụ nwere ike ịdị mma ugbu a na Google gara n'ihu na-emeziwanye site na iji igwe mmụta na ọgụgụ isi.
N'iburu nke ahụ n'uche, achọrọ m ịtinye ngwa mgbakwunye nke na-enye nsụgharị site na iji Google Translate, mana achọrọ m ihe zuru oke karịa dobe nke tụgharịrị saịtị ahụ. Achọrọ m ka engines ọchụchọ na-ahụ ma na-edepụta ọdịnaya m nke ụwa nke chọrọ atụmatụ ole na ole:
Metadata - mgbe search engines iri ari m na saịtị, Achọrọ m Nwabueze mkpado na isi m iji nye engines ọchụchọ ụzọ URL dị iche iche maka asụsụ ọ bụla.
URL - n’ime WordPress, Achọrọ m ka ndị permalinks webata asụsụ ntụgharị na ụzọ.
N'ezie, olile anya m bụ nke ahụ ga-emepe saịtị m ruo ọtụtụ ndị na-ege ntị na enwere ịlaghachi na mma maka itinye ego na mgbakwunye na mgbasa ozi - na-enweghị mkpa nke nsụgharị aka.
GTranslate WordPress ngwa mgbakwunye
Ngwaọrụ GTranslate yana ọrụ ndị esonyere gụnyere atụmatụ ndị a niile yana ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ:
Dashboard - Ihe omuma zuru ezu maka nhazi na akuko.
Nsụgharị igwe - Ntabi Google na Bing akpaghị aka translation.
Nchọpụta Nchọgharị Search - Search engines ga-index gị sụgharịrị peeji nke. Ndị mmadụ ga-enwe ike chọta ngwaahịa ị na-ere site n’inyocha n’asụsụ ha.
URL Enyocha Enyi na Enyi - Nwee URL dị iche ma ọ bụ Subdomain maka asụsụ ọ bụla. Ọmụmaatụ: https://fr.martech.zone/.
URL Ntughari - Enwere ike ịtụgharị URL nke weebụsaịtị gị nke dị ezigbo mkpa maka asụsụ dị iche iche nke SEO. Ga-enwe ike gbanwee URL ndị atụgharịrị. Nwere ike iji ikpo okwu GTranslate iji chọpụta URL atụgharịrị.
Na-edezi Nsụgharị - Jiri aka dezie ntụgharị asụsụ aka site na iji ihe edere ederede site na GTranslate ozugbo. Nke a dị mkpa maka ụfọdụ ihe… dịka ọmụmaatụ, agaghị m achọ aha ụlọ ọrụ m, DK New Media, sụgharịrị.
Na-edezi n'-ntanet - I nwekwara ike iji syntax n'ime edemede gị iji dochie njikọ ma ọ bụ onyonyo dabere na asụsụ.
The syntax bụ yiri maka ihe oyiyi:
Ma ọ bụrụ n’ịchọghị ngalaba atụgharịrị, ị nwere ike tinye otu klas nke ntughari.
Nchịkọta Ojiji - You nwere ike ịhụ okporo ụzọ ntụgharị ntụgharị gị na ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị asụsụ na dashboard gị.
Subdomains - nwere ike ịhọrọ banye subdomain maka asụsụ gị ọ bụla. Ahọrọ m ụzọ a karịa ụzọ URL n'ihi na ọ naghị akwụ ụtụ na webserver m. Subzọ subdomain ahụ dị oke ngwa ngwa ma na-atụ aka na Gtranslate's cached, sụgharịrị ibe.
domain - nwere ike ịnwe ngalaba dị iche maka asụsụ ọ bụla. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na-eji a .fr n'elu-larịị ngalaba (Nkeji), saịtị gị nwere ike ịkwalite elu na nsonaazụ engines na France.
Ndị na-emekọ ihe ọnụ - Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ndị mmadụ nyere aka na ntụgharị asụsụ nke akwụkwọ ntuziaka, ha nwere ike ịnweta GTranslate ma tinye mgbakwunye akwụkwọ ntuziaka.
Dezie Akụkọ - Lelee ma dezie akụkọ ihe mere eme gị nke idezi akwụkwọ.
Enweghị nsogbu mmelite - Ọ dịghị mkpa ịlele maka mmelite ngwanrọ ma wụnye ha. Anyị na-eche banyere mmelite ndị ọzọ. Just na-enwe obi ụtọ ruo ụbọchị ọrụ kwa ụbọchị
Asụsụ - Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English , Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian, Hausa, Hawaii, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese , Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish, Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malayalam, Malay, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romania, Russian, Serbian, Shona, Sesotho, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Samoan, Scots Gaelic, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish. , Ukraine, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu
Debanye aha maka Ọnwụnwa 15 nke GTranslate
GTranslate na nchịkọta
Y’oburu na iji uzo URL maka GTranslate, igaghi azo nsogbu obula na inyocha ahia gi asughariri. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site na subdomains, ị ga - edozi Google Analytics (yana Google Tag Manager ma ọ bụrụ na ị na - eji ya) iji jide okporo ụzọ ahụ. Enwere nnukwu ederede na-akọwa ntọala a ya mere agaghi m emeghachi ya ebe a.
N'ime Google Analytics, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkewaa nchịkọta gị site na asụsụ, ị nwere ike naanị tinye aha nnabata dị ka akụkụ nke abụọ iji nyo okporo ụzọ gị site na subdomain.
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka GTranslate.
Tags: ịsụgharị binggoogle translateNwabuezentụgharị asụsụ igwetranslationWordPresswordpress pluginntụgharị wordpresswordpress ntụgharị ngwa mgbakwunye